ikhaya » I-Archives Tag: Ukusasazwa Iinkqubo ezingenazintambo
Archives Tag: Ukusasazwa kweeNkqubo zeN Wireless
I-Interface Solutions ye-Laon entsha kwiMveliso yePortfolio
Imveliso yokusasazwa idibanisa ukongezwa kwe-Laon Intercom izisombululo kwiipotifoliyo zeemveliso. Imveliso yokusasazwa yinkqubo ye-German System Integration ye-Broadcast Solutions GmbH. Inkampani iya kubonisa iimveliso ze-LAON ngokokuqala ngqa kwi-IBC yokuma, i-hall 8, yima 8.A74. Imveliso ye-Interon yaseKorea yaseKorea ye-Intercom ikhanya ngokusebenza kwi-5GHz UNII Band kunye ...
I-AB405 - ABonAir inikeza isisombululo sesabelomali sokudluliselwa kwe-microwave engenantambo
Ngeenkqubo ezintsha ze-AB405TM, i-ABonAir isinika isisombululo sesabelomali sokusasazwa kwe-microwave engenawaya kumashishini okusasazo. Ngale nkqubo entsha yokusasazwa kweMveliso eyenza iteknoloji yokudlulisa i-microwave engenazo i-wire inokuhlawulekayo kubo bonke, inika umgangatho wobungcali kunye nokuzinza kwi-bhajethi engabizi-mali ukuya kwii-750 zamitha. Abavakalisi beeNtengiso zaseAsia zokurhweba eSingapore baya ...
Ukusasazwa Isisombululo esitsha isisombululo se-ABonAir wirelesss solutions solutions
I-ABonAir Broadcast Solutions GmbH yongeza enye ibhendi kwisahlulo sayo sokusabalalisa. Ukusebenza ngokukhawuleza inkqubo yokuhlanganiswa kweJamani ihambisa ii-ABonAir ezingenazintambo zekhompyutha ezinxibelelwano kwiYurophu, eMbindi-Mpuma kunye nakumazantsi-mpuma ase-Asia. Iinkqubo zekhonkco zevidiyo ze-ABonAir zingasetyenziselwa ukudlulisa umxholo wevidiyo ukusuka kwiikhamera zobugcisa kunye namaqela okuvelisa kwi-OB Vans okanye iziteshi zokusasaza usebenzisa i-teknoloji ye-microwave kunye ne-7 msec ...
Ukusasazwa kweeNkqubo ezingenazintambo kwenza i-Debut kwiCABSAT 2015
I-CABSAT 2015, iHolo 3, I-Stand C3-41, i-Dubai 10-12 Ngo-March 2015: Inkampani entsha, i-Broadcast Wireless Systems, isetyenziselwe ukunikezela ngobuchule, ubuchule kunye neengcebiso zengcebiso kwiimfuno zeRF ezisasazwa kwaye ziza kwenza i-CBSAT 2015 . Equlunqwe ngongcali engenazintambo uStuart Brown noMax Zaja, abanamava angaphezu kwama-60 eminyaka phakathi kwabo kunye nokuthanda kwabo ...